အာဖရိက ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို လျော်ကြေးပေးရန် OECD ပြည်နယ်များအတွက် WTN အရေးပေါ် တောင်းဆိုချက်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » သတင်း » အာဖရိက ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို လျော်ကြေးပေးရန် OECD ပြည်နယ်များအတွက် WTN အရေးပေါ် တောင်းဆိုချက်
အာဖရိကခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အစိုးရသတင်းများ • လူ့အခွင့်အရေး • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News • Wtn
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ်တွေ့ရှိမှု Omicron အမျိုးအစားကြောင့် အာဖရိကတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ၏ မကြာသေးမီက သီးခြားခွဲထားရခြင်းသည် အာဖရိကခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ စိတ်ပျက်ပြီး ဒေါသထွက်လျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ (OECD) သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မူဝါဒများကို တည်ဆောက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတွေ. ရည်မှန်းချက်သည် အားလုံးအတွက် သာယာဝပြောရေး၊ တန်းတူရေး၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် သုခချမ်းသာကို ဖြစ်စေသော မူဝါဒများကို ပုံဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
အစိုးရများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ နိုင်ငံသားများနှင့်အတူ OECD သည် အထောက်အထားအခြေခံသော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ချမှတ်ကာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများစွာအတွက် အဖြေရှာရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ခိုင်မာသော ပညာရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ အခွန်ရှောင်ခြင်းများကို တိုက်ဖျက်ခြင်းအထိ၊ OECD သည် ဒေတာနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ထူးခြားသော ဖိုရမ်နှင့် အသိပညာဗဟိုချက်၊ အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် မျှဝေခြင်းနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ ပေးပါသည်။ .
OECD သည် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် လက်ရှိကာလ၏ တင်းမာသောမူဝါဒစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြားနိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သူများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။
စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့သည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုကို လှုံ့ဆော်ရန် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင် ၃၈ နိုင်ငံဖြင့် အစိုးရ အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။
အောက်ပါနိုင်ငံများသည် လက်ရှိ OECD အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျ7ဇွန်လ 1971
သြစတြီးယား 29 စက်တင်ဘာလ 1961
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ 13 စက်တင်ဘာလ 1961
ကနေဒါ 10 ခုနှစ်ဧပြီလ 1961
ချီလီ7မေလ 2010
ကိုလံဘီယာ 28 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
ကော့စတာရီကာ 25 မေလ 2021
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 21 ဒီဇင်ဘာလတွင် 1995
ဒိန်းမတ် 30 မေလ 1961
အက်စတိုးနီး9ဒီဇင်ဘာလတွင် 2010
ဖင်လန် 28 ဇန်နဝါရီလ 1969
ပြင်သစ်7သြဂုတ်လ 1961
ဂျာမနီ 27 စက်တင်ဘာလ 1961
ဂရိ 27 စက်တင်ဘာလ 1961
ဟန်ဂေရီ7မေလ 1996
အိုက်စလန်5ဇွန်လ 1961
အိုင်ယာလန် 17 သြဂုတ်လ 1961
အစ္စရေး7စက်တင်ဘာလ 2010
ITALY 29 မတ်လ 1962
JAPAN 28 ခုနှစ်ဧပြီလ 1964
ကိုရီးယား 12 ဒီဇင်ဘာလတွင် 1996
လတ်ဗီးယား 1 ဇူလိုင်လ 2016
Lithuania5ဇူလိုင်လ 2018
လူဇင်ဘတ်7ဒီဇင်ဘာလတွင် 1961
မက္ကဆီကို 18 မေလ 1994
နယ်သာလန် 13 နိုဝင်ဘာလ 1961
နယူးဇီလန် 29 မေလ 1973
နော်ဝေး4ဇူလိုင်လ 1961
ပိုလန် 22 နိုဝင်ဘာလ 1996
ပေါ်တူဂီ4သြဂုတ်လ 1961
စလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ 14 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2000
ဆလိုဗေးနီး 21 ဇူလိုင်လ 2010
စပိန်3သြဂုတ်လ 1961
ဆွီဒင် 28 စက်တင်ဘာလ 1961
SWITZERLAND 28 စက်တင်ဘာလ 1961
ကြက်ဆင်2သြဂုတ်လ 1961
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း2မေလ 1961
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 12 ခုနှစ်ဧပြီလ 1961
အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Cuthbert Ncube သည် အဖွဲ့အစည်း WhatsApp အဖွဲ့ထံ ယမန်နေ့က ပို့စ်တင်ခဲ့သည်-
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပါသည်။ အာဖရိကကို အထီးကျန်ဖြစ်စေရန် ဥရောပနှင့် အခြားသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို လုံးလုံးစိတ်ပျက်ကာ စက်ဆုပ်ရွံရှာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ တည်တံ့ခဲ့သည့် တန်းတူညီမျှမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲပဲ့တင်ထပ်နေသောကြောင့် ၎င်းကို မျှော်လင့်ထားသည်မှာ ကြာပါပြီ။ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ အချိန်တစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကို စုစည်းဖို့ အာဖရိကအတွက် အခုအချိန်ပါပဲ။
ဤတုံ့ပြန်မှုတွင် စကားစုများ ပါ၀င်သည်- မစ္စတာ ဥက္ကဋ္ဌကို လေးစားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထ၍ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်ကြီးကို ကာကွယ်ရပါမည်။
Brussels ရှိ SunX မှ ပရော်ဖက်ဆာ Geoffrey Lipman က ဤအရာကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
အာဖရိကမှ ချစ်လှစွာသော မိတ်ဆွေများ- နားလည်နိုင်သော စိတ်ခံစားမှုသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဤ Omicron အဖြစ်မှန်အသစ်ကို တည်ငြိမ်သောယုတ္တိဖြင့် ချဉ်းကပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကိတ်တောင်းမှ အမ်စတာဒမ်သို့ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း KLM လေယာဉ်ပေါ်၌ ကူးစက်ခံရသူ ၆၀ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ မျိုးကွဲအသစ်သည် လက်ရှိကာကွယ်ဆေးထိုးကာကွယ်မှုကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကို စမ်းသပ်နေပြီး ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစောပိုင်းကာလဖြစ်သည်။ ဥရောပရှိ အာဏာပိုင်များသည် ကွက်လပ်ကို ပိတ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် အာဖရိကဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်ကြောင့် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံနိုင်ငံသား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗျူဟာများတွင် သေစေလောက်သော အပေါက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤနှင့် အနာဂတ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များကို ကာမိစေရန် ကြီးမားသော ခရီးသွား လျော်ကြေးငွေ ရန်ပုံငွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း (ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အာမခံ လုပ်ငန်းများ အပါအဝင်) ကို စည်းရုံးသင့်သည်။
ဂျာမနီမှ Wolfgang Koening က ထပ်လောင်းပြောကြားပါသည်။
ထို့အပြင် အာဖရိကန်လူမျိုးများအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှင့် မျိုးကွဲအသစ်များ မပေါ်ထွက်မလာအောင် တားဆီးရန် အာဖရိကနိုင်ငံသားအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အခွင့်အရေးပေးရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးမူပိုင်ခွင့်များကို ရုပ်သိမ်းရန် အချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။
နိုင်ဂျီးရီးယားမှ Kalo Africa မီဒီယာမှရေးသားခဲ့သည်
မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာထက် မှားယွင်းတဲ့တံဆိပ်ကပ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုပါ။ ငါတို့စကားပြောဖို့လိုတယ်။
သူ ဆွံ့အနေပြီး သူ့နိုင်ငံကို မှားယွင်းစွာ တံဆိပ်ကပ်ထားမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ ပြောနေတာက အာဖရိကတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးပါ။ ရယ်စရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်က လွယ်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဤကိစ္စတွင်၊ OMICRON ၏မူလအစကို ဆုံးဖြတ်ရန် ထင်ရှားသောအထောက်အထားမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အာဖရိကဖြစ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချကြသည်။ Botswana အမျိုးအစားကို ပထမဆုံးအမည်ပေးသောအခါ ဘော့ဆွာနာသည် လွယ်ကူသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဟောပြောရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာ လူသားတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စုပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုပါ။
ဇမ်ဘီယာမှ ATB အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပို့စ်တင်ခဲ့သည်-
နယ်နိမိတ်ပိတ်ရေးတွင် အောင်နိုင်သူ မရှိပါ။ နယ်နိမိတ်ပိတ်သူများနှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ဆုံးရှုံး/ရှုံးသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့ တိုးတက်သောနည်းလမ်းသည် COVID ကူးစက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လက်ရှိအစီအမံများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တွန်းလှန်ရန်သာဖြစ်သည်။
ဆီနီဂေါနိုင်ငံမှ Faouzou Deme က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ- ဤကပ်ရောဂါသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် အာဖရိကတိုက်ကို ချေမှုန်းရန်အတွက် ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်အင်အားကြီးများ၏ စစ်အေးတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဏ္ဍနှင့် အခြားဒေသခံများအတွက် ခရီးသွားထုတ်ကုန်များ စားသုံးမှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်း (ဒေသခွဲ) အတွက် လှုံ့ဆော်မှုဖိုရမ်တစ်ခုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မူတည်ပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သဘောထားပါ။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
တောင်အာဖရိက သမ္မတ Cyril Ramaphosa က မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အာဖရိကနိုင်ငံများသည် ဥရောပ၊ အာရှနှင့် မြောက်အမေရိကကဲ့သို့သော တိုက်ကြီးအပြင်ဘက်ရှိ စျေးကွက်များတွင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို စေ့စေ့ကြည့်ရှုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သည်။ အာရုံကို အိမ်နဲ့ ပိုနီးဖို့ အချိန်တန်ပြီ။
တောင်အာဖရိကရှိ ထိပ်တန်းသုတေသနပညာရှင်များမှ ထိပ်တန်းသုတေသနပညာရှင်များက COVID-19 ၏ Omicron ပိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်စီတို့ကို ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အလုံးစုံသဘောတူထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည်ဟု မထင်မိရန် အရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်အရ ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် အပျက်သဘောဆောင်သော တံဆိပ်တပ်သင့်ပြီး ထိုနိုင်ငံအား အထီးကျန်ဖြင့် အပြစ်ပေးခြင်းမပြုရန်၊ နှင့်
ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်ရန် အထောက်အကူမဟုတ်ကြောင်း WHO မှတရားဝင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ နှင့်
ဤအကြံဉာဏ်ကိုပေးသော်လည်း OECD အစိုးရများသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင် ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်မှုကို တစ်ဖက်သတ်ချမှတ်ထားသည်။
ယင်းသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ၏ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍအပေါ် တိုင်းတာနိုင်သော တိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုစီးပွားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊
အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အတည်ပြုထားသည့်အတိုင်း အဆိုပါ အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍကို လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိသော OECD ပြည်နယ်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ရန် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်က တောင်းဆိုထားပြီး ယင်းတားမြစ်ချက်များကို ဖယ်ရှားပစ်သည်အထိ လိုအပ်သည့်အဆင့်တွင် ဆက်လက်ထားရှိရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သီတင်းပတ်ကုန်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာက တောင်အာဖရိကနဲ့ ဘော့ဆွာနာတို့လို့ တံဆိပ်ကပ်ထားပုံရတယ်။
ဒီအတောအတွင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဂျာမနီ၊ ယူကေ၊ ကနေဒါနဲ့ ဟောင်ကောင်တို့မှာ မျိုးကွဲအသစ်ရှိနေပြီဆိုတာ သိထားပြီး သွားလာနေပါတယ်။ ဂျပန်နှင့် အစ္စရေးတို့သည် နိုင်ငံခြားသားများအားလုံးအတွက် ၎င်းတို့၏ နယ်နိမိတ်များကို ပိတ်ထားသည်။ ဒါက အာဖရိကတောင်ပိုင်းကို ကျော်လွန်တဲ့လမ်းပါ။
အာဖရိကတွင် လူတိုင်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နည်းလမ်းမရှိခြင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဗီဇပြောင်းလဲမှုအသစ်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည် ။ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်က လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ COVID-19 နဲ့ ဘယ်လို သွားလာရမလဲဆိုတာနဲ့ နယ်စပ်နဲ့ စီးပွားရေးကို ဖွင့်ထားဖို့။
ယင်းသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ၏ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍအပေါ် တိုင်းတာနိုင်သော တိုက်ရိုက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုစီးပွားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ။
ယနေ့တွင်၊ WTN သည် ပြင်းထန်မှုအသစ်ကြောင့် မထိခိုက်သင့်သော အာဖရိကနိုင်ငံများမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ယူဂန်ဒါရှိ ခရီးသွားအော်ပရေတာတစ်ခုက ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်ခရီးသွားများထံမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း WTN သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဖရိကအားလုံးကို ယခုတံဆိပ်တပ်ထားပုံရပြီး၊ ဤနေရာတွင် ရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်သည် OECD ပြည်နယ်များထူထောင်ရန် ရန်ပုံငွေတစ်ခုတောင်းဆိုနေသည်။
အဆိုပါ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက် ထို့ကြောင့်၊ OECD ပြည်နယ်အချို့၏ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် အာဖရိကတောင်ပိုင်း ခရီးသွားကဏ္ဍကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်စေရန် ပံ့ပိုးပေးရန် နှစ်ဖက်သဘောတူထားသည့် လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ဖက်သတ်ရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုထားသည်။
WTN သည် EU၊ US၊ UK၊ နှင့် Japan တို့နှင့်အတူ အာဖရိကန်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့်အတူ အာဖရိကခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးများနှင့် ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် အာဖရိကခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့အား အကြံပြုထားသည်။
အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အတည်ပြုထားသည့်အတိုင်း အဆိုပါအာဖရိကနိုင်ငံများ၏ ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍကို လျော်ကြေးပေးရန် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ရက်က ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။ WTN သည် ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ လျော်ကြေးငွေရန်ပုံငွေကို လိုအပ်သောအဆင့်တွင် ထိန်းသိမ်းထားရန် တောင်းဆိုထားသည်။